Iipropati zePeriodic Elements of Elements
Iintlobo zeTradidic Table
Itheyibhile yexesha elihle ihlela iziganeko ngeepropati zexesha eliqhelekileyo, eziyimizila ephindaphindiweyo kwimpawu zomzimba kunye neekhemikhali. Ezi zintengiselwano zinokuqikelelwa nje ngokuhlolisisa iitheyibhile zexesha kwaye zingachazwa kwaye ziqondwe ngokuhlalutya iinkqubo ze- electron zezinto. Izinto zithatha ukufumana okanye ukulahlekelwa iifowuni zepalence ukufezekisa ukwakha i-octet. Ii- octet ezizinzile zibonwa kwiigesi ezingenayo, okanye iigesi ezihle , zeQela VIII kwitheyibhile lexesha.
Ukongezelela kulo msebenzi, kukho ezinye ezimbini izinto ezibalulekileyo. Okokuqala, iifowuni zongezwa enye ngexesha lihamba ukusuka ekhohlo ukuya ngasekunene kwixesha. Njengoko oku kwenzeka, ii-electron ze-shell shell zangaphandle zikhangela kakhulu ukukhanga kwenyukliya, ngoko ke ii-electron ziba sisondele kwinucleus kwaye zibophelelwe ngakumbi. Okwesibini, ukuhamba phantsi kwekholomu kwitheyibhile yenkcazelo, iifowuni zangaphandle zibophelwa ngokungqongqo kwi-nucleus. Oku kwenzeka ngenxa yokuba inani lamanqwanqwa eenqununu ezizalisiweyo (ezikhusela iifowuni zangaphandle ukusuka ekukhangekeni kwi-nucleus) linyuka phakathi kweqela ngalinye. Ezi zithethe zichaza ixesha elibhengeziweyo kwizinto ezisemgangathweni zendawo ye-atomiki, amandla e-ionization, i-electron ebumbene kunye ne- electronegativity .
Irejista yereythi yelungu liyingxenye yomgama phakathi kwamaziko amabini e-atom asebenzayo.
Ngokuqhelekileyo, irejista ye-athomu iyancipha kwixesha elilodwa ukusuka kwesobunxele kuya kwesokudla kwaye lenyuke phantsi kweqela elinikeziweyo. Ii-athomu ezinama-radii amakhulu kunazo zonke zifumaneka kwiQela I nakwinqanaba lamaqela.
Ukufuduka ukusuka kwesobunxele ukuya ngasekunene kwixesha elide, ii-elektrononi zongezwa enye ngexesha kwi-shell ye-outer shell.
Iifowuni ngaphakathi kwegobolondo ayikwazi ukukhusela omnye kumkhangeli kwiiponononi. Ekubeni inani leeponononi liye landa, i-nuclear nyukliya iyanda kwithuba elide. Oku kubangela ukuba irejista ye - athomu iyancipha.
Ukuhla kweqela kwitafile zexesha , inani lama-electron kunye ne-electron shells lizaliswa, kodwa inani leenqwelo ze-valence lihlala lifanayo. Iifowuni zangaphandle kwiqela zibonakaliswe kwi- yunyukliya efanayo , kodwa iifowuni zifunyenwe ngaphaya kwe-nucleus njengoko inani lamagqabha e-energy agcwele. Ngoko ke, i-atomic radii iyanda.
Ionization yamandla, okanye ionization, inamandla okufuneka ukuba kususwe ngokupheleleyo i-electron kwi-athomu ye-gaseous okanye ion. I-electron isondele ngakumbi kwaye iminyene ngokugqithiseleyo yinkqubo ye-nucleus, kunzima ngakumbi ukususa, kunye nokuphakanyiswa kwayo kwamandla e-ionization. Amandla okuqala e-ioni amandla afunekayo ukususa enye i-elektron kwi-atom yomzali. Iwesibini yamandla e-ionisation iyimfuneko yokukhupha i-elektronesi yesibini ye-valence ukusuka kwi-ion engavumelekanga ukwenza i-divalent ion, njalo njalo. Amandla okuphumelela i-ionization akhula. Umbane wesibini we-ionisation uhlala ukhulu kunombane wokuqala we-ionization.
Amandla e-ionization enyukela ukuhamba ukusuka kwesobunxele ukuya ngasekunene kwixesha (ukunciphisa i-atomic radius). Ionization yamandla iyancipha ukuhamba phantsi kweqela (ukwandisa i-atomic radius). Iinqununu zeQela I zinamandla okwenza i-ionisation ephantsi kuba ukulahlekelwa kwee-elektronta kwakha i-octet ezinzile.
I-electron ibumbano ibonisa amandla e-athomu ukuba yamkele i-electron. Yinguqulelo yamandla eyenzekayo xa i-electron yongezwa kwi-athomu ye-gaseous. I-Atom ezinokusetyenziswa ngamandla enyukliya zinamandla amakhulu. Ezinye i-generalizations zinokuthi zenziwe malunga neenkcukacha ze-electron zamaqela athile kwitafile zexesha. Iqela le-IIA, ihlabathi le-alkaline, linamaxabiso aphantsi okwi-electron. Ezi zinto zizinzile kuba zizalise ii- subshells. Iinqununu ze-VIIA, i-halogen, zinamafowuni aphakamileyo aphezulu kuba ukongezwa kwe-electron kwi-atom kubangela igobolondo epheleleyo.
Iinqanaba zeQela VIII, iigesi ezintle, zinombane we-electron kufuphi ne-zero kuba i-athomu nganye ine-octet ezinzileyo kwaye ayiyi kwamkela i-electron ngokukhawuleza. Izinto zezinye iinqununu zinamafowuni aphantsi.
Ngexesha, i-halogen iya kuba ne-electron ephezulu, ngelixa igesi efanelekileyo iya kuba ne-electron ephantsi. I-Electron ibumbano isinciphisa ukuhamba phantsi kweqela kuba i-electron entsha iya kuba yinyuka kwi-atom enkulu.
I-Electronegativity ngumlinganiselo wokukhangwa kwe-athomu kwi-electron kwi-bond bond. Ephakamileyo i-electronegativity ye-athomu, enkulu ekukhangekeni kwayo yokudibanisa ii-electron . I-Electronegativity idibene ne-ionization yamandla. Iimfowuni ezinamandla aphantsi kwe-ionisation zine- electronegativities ephantsi kuba i-nuclei yabo ayisebenzisi amandla enamandla kwi-electron. Izinto ezinegunya eliphezulu ze-ioni zinezikhundla eziphezulu ezikhethiweyo ngenxa yododo oluqinileyo olufakwe kwii-electron nge-nucleus. Kwinqanaba, i-electronegativity iyancipha njengoko inani le-athomu liyakwanda , ngenxa yokunyuka komgama phakathi kwe- electron ne-nucleus ( i-radius enkulu ye-atomiki ). Umzekelo we-electropositive (okt, i-electronogativity ephantsi) i-cesium; umzekelo wento ekhethiweyo ye- electronegative i-fluorine.
Isishwankathelo sePeriodic Properties Elements
Ukuhamba kwesobunxele → Kukho
I-Atomic Radius iyancipha
Ionisation Energy Amanda
I-Electron Affinity Generally Increases ( ngaphandle koMbane weGesi oMandla oMmandla osondeleyo kwiZero)
Ukuhamba phezulu → Ngezantsi
I-Atomic Radius iyanda
Ionization Energy Ihla
I-Electron Ubumbano ngokubanzi iyanciphisa ukuhamba kweqela
Iimetali ezingapheliyo kunye ne-Metalloids - Itheyibhile yePeriodic
Iinkcukacha zeNkokeli kunye neZakhiwo -Element 82 okanye Pb
Umbala oPrintiweyo wePeriodic Table of Elements
Iqela elincinci leBrabreaker Imidlalo
Ubomi beHollis Stacy
Iimviwo zeeSatifikedi sePhakamileyo seSikolo
Uluphi uhluko phakathi kweSikethi seHockey kunye nekhati lomzobo?
I-Gunpowder Facts kunye neMbali
'Ukubaluleka kokuzuza' Ukuhlaziywa
Ukutyelela I-Photo ye-Pro Pro-One-I-Topspin Backhand Grips
Ukuvalelwa kwabaNtwana kuXhotyiswe kuLwaphulo-mthetho olungakumbi
Yiba ngumfundi ongcono weNgesiNgesi kunye nalezi ziCwangciso zoPhando
Isikhokelo kwixesha elizayo kunye nokuthanda
IsiGama saseTaliyane isigama
Ukufumana Amanzi kwi-Mars
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe yaseLeyte Gulf
Iilwimi zoBugcisa bobuGcisa
I-Lymph Nodes - Umsebenzi, i-Anatomy, kunye neCarcer
Kutheni Iitya Zeenqwelo Zakho Zilahlekelwa Ngayo Ebudeni Busika